एनआरएन–नेतृत्व :: Press Chautari ::
गैर–आवसीय नेपाली संघ (एनआरएन), अमेरिकाको आसन्न निर्वाचन नजिकदै जाँदा नेतृत्वको लागि चुनावी गर्मागर्मी ह्वात्तै बढेको छ । यो गर्मीले जुन ९ तारिखको मध्येरात सम्ममा धेरै उम्मेदवारहरुको सर्दी फ्याँक्ने पक्का छ भने पुगनपुग १० महिने कार्यकालको लागि निर्वाचित नेतृत्वपंक्तिलाई असिनपसिन हुने निश्चित् छ ।
सन् २००६ सालमा औपचारिक दर्ता पाएको एनआरएन, अमेरिका स्थापनाको ७ बर्षपछि एकै चोटी यो रफ्तारमा हुँइकिदैछ । यो गति स्वयम्मा गलत नै त होइन, तथापी भविष्यमा ब्याक गियरमा फर्किनु पर्यो भने यसको क्षती अपुरणिय हुने देखिन्छ । यसर्थ हामीले आवश्यक मैदान, क्षमता र भार थेग्ने कंक्रिडभूमी बनाईसकेका छौं या छैनौं ? कतै हामी अलि छिटो पो भयौं कि ? कतै आत्तियौं कि ? झट्ट सुन्दा नमिठो लाग्ने तर यथार्थपरक प्रश्न यहि हो ।
यो अमेरिकी भुमीमा हामी नेपाली इतिहास बनाउने क्रममै छौं । यो इतिहास निमार्णको हिस्सेदार हामी सबै हौं । पछिल्लो समय यो कोलम्बसले कोतर्दै भस्मे फाँडेर बस्ती बसाएको आप्रावासीभूमी अमेरिका एनआरएनमय बनेको छ । नेतृत्वका लागि अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका उम्मेदवारहरुलाई भ्याई–नभ्याई छ । मानौं यो दौंडमा एक पाइला पनि पछि पर्नु हुन्न, हुँदै हुन्न । देशको प्रत्येक राज्यमा छरिएर रहेका नेपालीहरु समक्ष उनीहरु आफ्नो प्रतिबद्धता र घोषणा-पत्र लिएर पुगेकैछन् । यो माहौलले अझ नजिकबाट एउटा नेपालीले अर्काे नेपालीलाई जोड्न पाएकोछ । लाग्छ, तिनका सुख–दुःख बाँड्न पाएकोछ । यो प्रवासभूमीमा हामी नेपाली जातीले एक-अर्कालाई यत्ति गर्न पाए लाख हुन्छ । पाखुरी बजारेर छाक टार्नु त आफैले छदैछ । यो फ्रयाङ्कलिन रुज्वेल्टले श्रम गर्न सिकाएको बस्ती हो । यो मार्टिन लुथरले समानताको लागि कोरलेका सपनाको शहर हो । परार सेतो दरबार छिर्नु अघि फरक रङधारी बराक हुसेन ओबामाले यसै भनेका थिए–“यो देश हामी सबैको हो ।”
विभिन्न् कारणहरु सुट्केस र झोलामा बोकेर देश छोड्ने हामी नेपालीहरु विश्वका सय भन्दा बढि देशमा प्रवासी जीवन बाँचीरहेकाछौं । अवसरहरुको भूमी (ल्याण्ड अफ अपरच्यूनिटी) भनेर चिनिएको यो शक्तिशाली मुलुकमा हाम्रो बसाई त्यत्ति पुरानो भने हुँदै होइन । तथापी हाम्रो संख्या बढेसँगै हामीमा सामुहिक एकताको खाँचो पर्यो । मातृभूमीप्रति किङकर्तव्यविमुख हुन नसकेर “लौन केहि गरौं” भन्ने भावनाले विभिन्न संस्थाहरु खोलिए । जाति, क्षेत्र, बर्ग, पार्टी अनि अनेक झुण्डहरुमा हामी बाँडियौं हामी यहाँ पनि । त्यो समयको माग थियो या सामाजिक भाग बण्डा समयले नै बताउँला । तर यत्तिबेलाको एनआरएन मुभ्मेन्ट यस्तो स्वयम् सिद्धतथ्य बन्न सकोस् जो समग्र नेपालीको हक, हित र अधिकारको लागि लड्ने निर्विकल्प साझेदारी संस्था होस् । एउटा सदस्यलाई यत्ति भए पुग्छ ।
यता उम्मेदवारहरुको प्रतिबद्धता र घोषण–पत्र हेर्दा लाग्छ,–एनआरएन, अमेरिकामा क्रान्ति आउने निश्चित्प्रायः छ । बिशुद्ध सामाजिक सेवाभावले त्यत्तिका कार्य गर्ने जुन अठोट उम्मेदवारहरुले राखेकाछन् स्वयम्मा प्रसंशानीय छ । जुन ठाउँ र पदमा बसेर तलब, भत्ता र सुविधा शून्यप्रायः छ त्यसको लागि यत्तिका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नलाई यहाँहरु सबैले जुन उत्साह र अठोट लिनु भयो यहाँहरु सबैलाई पुग–नपुग ४ हजार मतदाताहरुको मात्रै होइन दुई लाख भन्दा बढि एनआरएन, अमेरिकीहरुको स्यालुट छ । पाउने केहि होइन, सिर्फ दिने ठाउँ हो यो एनआरएनको नेतृत्वदायी भूमिका । यहि स्वार्थ हुनु पर्छ तपाईहरुमा । यदि लिने स्वार्थमा तपाई एनआरएनको काँध टेकेर उभिने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको मितिसम्ममा तपाई जो कोहिले आर्जेको सामाजिक मर्यादा, नैतिक बल र सम्मान ध्वास्त हुनेछ । यसैले चुनौतीपूर्ण छ तपाईको उम्मेदवारी । खतरामा छ तपाईको नाम, काम र सम्मान आदि इत्यादि... ।
१० महिने कार्यकालको लागि साँढे ४ दर्जन उम्मेदवारहरु मैदानमा रहनु प्रजातान्त्रिक र सुखद पक्ष नै मान्नु पर्छ । तर के थेग्न सक्छ त यो उत्साहले एनआरएन, अमेरिकाका बाँकी बर्षहरु ? जित्नेहरुले आनन्दको श्वासप्रश्वास फेर्दै गर्दा पराजित अनुहारहरुमा उस्तै सन्तोषको चमक देखिन्छ त ? के त्यो सम्भव हुन्छ, संवेदना बोकेको मान्छेको हृदयभित्र ?
चुनावी लहरका तस्बिरहरुमा छाएका उज्यालो अनुहारहरु चुनावी परिणाम पछि पनि त्यस्तै चम्किलो बनोस् । फेसबुक र ट्वीटरमा हातेमालो गरेका तस्बिरहरु जस्तै जुन ९ पछिका दिनहरुमा सहकार्य गर्दै जानुहोस् । त्यत्तिबेला तपाई एउटा हारेर हामी सारा एनआरएनहरु जित्नेछौं । हामी तपाईको विजयमा जयजयकार गर्न तयार छौं के तपाई हाम्रो त्यो जीतमा रमाउन सक्नु हुन्छ ?
एनआरएन, अमेरिकामा “एकपटकको नेपाली, सधैंका लागि नेपाली” यो एउटा मूल मन्त्र जस्तै बनेकोछ यत्तिबेला । प्रायः हरेक उम्मेदवारले यसैलाई शिरोधार्य गरेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरु सार्वजानिक गर्नु भएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि तपाईको कत्रो गर्व ? यसले हाम्रा छातीहरु कति फराकिला र चौडा भएकाछन् । यहि नाराले हाम्रा शीरहरु कति उँचो भएकाछन् । यसलाई साकार पार्न पनि तपाई हाम्रो लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि–अघि लाग्नुहोस् । सारा प्रवासी मनहरु तपाईका पछि-पछि लाग्नेछन् । हामी तयार छौं हाम्रो हितमा तपाईले उठाउनु भएको हरेक मुद्धामा सहिछाप र ल्याप्चे लगाउन ।
अलग–अलग कारण र पृष्ठभूमी बोकेर हामी यो देशमा ओतिएकाछौं । यो पातालभूमीमा बसेर हामीले देख्ने सपनाहरु त्यो सात समुन्द्रपारीको गाउँ र बस्तीहरुकै हो । हामीले सपनामा देख्ने बस्तीहरु भत्किदै गर्दा हामी यो अग्लो भवनको माथ्लो तल्लाबाट पल–पल डङ्रङ्गै खस्ने गर्छौ । हाम्रा साझा सपनाहरु उठाउन तपाईले केवल कदम उठाउनुहोस् लाख पाइलाहरु पछि-पछि लाग्नेछन् । देश भनेको भूगोल मात्र पनि होइन, छातीमा देश बोकेर बाँचेका हामीलाई प्रत्येक चोटी उता देश दुख्दा यता हामीलाई पनि दुखेकै हुन्छ । जत्ति जत्तिबेला हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमान दुख्छ त्यत्तिबेला तपाई झिल्को भएर अघि बढ्नुस् हामी आगो भएर झोसिन तयार छौं । उत्तरको बादशाह भनाउँदो चीन शान्त त छ तर किन किन उसलाई पनि हाम्रो देशको उन्नतीमा रमाउन सक्दैन । दक्षिणको छिमेकी भारत साह्रै चतूर छ अनि त उसैको इशारामा हामी चल्नु पर्छ । तपाई पनि उनीहरुको मौनता र चतूरतामा शंक गर्नुहोस । हाम्रो निगरानी छ छदैछ । उता सिमानामाथिको जंगेपिलर भकाभक उखेलेर हाम्रो देशलाई मेरो हो भन्छ छिमेकी-यत्तिबेला खबरदारी गर्नुहोस् । हामी हाम्रो बुत्ताले भ्याए जत्ति जंगेपिलर उखेलिनबाट बचाउँला । अरु केहि गर्नु पर्दैन, हाम्रो सरोकारका विषयहरुमा तपाई औंला मात्र ठढाउनुहोस्, हामी मुठ्ठी कसेर जुलुस गर्न तयार छौं ।
ढिलै भएपनि अमेरिकामा एनआरएन यसरी जरा-जरामा पुगेकै छ । यहि धरातलबाट शूरु गरौं जहाँ-जहाँ खाँचो र खाल्डो परेको छ । तर किमार्थ यो संस्थालाई जात, धर्म, बर्ग, क्षेत्र र राजनीतिको रंङ् नलागोस् । यो यस्तो घिन लाग्दो रङ्ग हो जसलाई पोते पनि कालै देखिन्छ । हामी त्यो कालो मान्छे नबनौं ।
हामी सफेत मान्छे ।
बुधवार, २०७१ जेष्ठ ०७ गते १८:३६ / Wednesday, May 21, 2014 6:36 pm